Files .mov play-xalin ama Aayad keliya ee Windows Media Player 12/11 / 10etc
Qaybta 1: Waa maxay qaabka MOV?
Part2: Maxaad Windows Media Player ma ciyaari karo MOV?
Part3: Sida loo ciyaaro MOV la Windows Media Player?
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka muuqaalada tahay of Media Windows ka Player in aad gelisaan karaa nooc kasta oo file in user u baahan yahay iyo sabab la mid ah waxaa lagu tiriyaa sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah ciyaaryahan tahay in waayeen sameeyaan ma aha oo kaliya la hubiyo in user marnaba u baahan rakibo cusub laakiin dhinaca kale waxa ay sidoo kale hubineysaa in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in user oo aan arin kasta sidii loo dhisay oo qayb ka ah OS ee arrintan la xiriira. Si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah qaababka aan la ciyaarnay oo tutorial this hubiyo in arrimaha user ee ku saabsan qaab .mov waxaa lagu xallin ka dhigi doonaa.
Soo diyaariyay Heerarka Ururka Caalamiga ah tani waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican oo aad u hubiso in meel bannaan oo ka yar waxa uu ku mashquulsan kala iibsiga iyo xogta waa u fududahay iyo gobolka of farshaxanka. Waa sabab la mid ah in user helo ma aha oo kaliya natiijooyinka ugu fiican marka la eego ciyaaro, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrin oo kala iibsiga user xogta la soo gabagabeeyo. Si ka duwan oo ah qaabab kale tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in arrimaha waafaqsan madal cross waxaa lagu xalin sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in qaabka loo isticmaalo la Media Windows ka Player ka dib wixii kaloo la sameeyo iyo arrimaha guud ayaa sidoo kale la xalin arrintan la xiriira sameeyo.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ciyaartoyda in ay soo bixi si loo hubiyo in ciyaareed ee qaab MOV la sameeyo suurtagal ah waa in la soo saaray shirkado caan ah si ku dheer ordi user marnaba wajahaya kasta arrimaha la xiriira this ifafaale. Waxaa sidoo kale si dhow u la xidhiidha qaab MP4 sidii labada ay isticmaalaan isla MPEG-4 qaab weelka oo sidaas daraaddeed labadan qaabab sidoo kale waxa loo arki karaa si dhow ula xidhiidha in la xiriira helitaanka weelka. Qaybta dambe ee tutorial ka hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta arrinta sakhiray iyo waxa la xalin sida ay tahay doonista iyo rabitaan ee user ee buuxa. Tutorial ayaa sidoo kale ka dhigi doonaa hubiyo in qalabka lagama maarmaanka sidoo kale la siiyaa arrintan la xiriira si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato iyo wax kasta oo file waxaa waxaa la ciyaaray oo aan wax arrintan oo dhibaato marka ay timaado daaqadaha media player .
Waxaa jira dhowr sababood oo ay ka dambeeyeen arrinta uu soo sheegnay oo ay noqon kartaa labada farsamo iyo mid aan farsamo. Arrimaha farsamo si kastaba ha ahaatee waa mid aad u muhiim ah in arrintan la xiriira oo sidaas daraaddeed iyagu waa inay la xalin gacanta ugu horeysay si loo hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin iyo user helo natiijada ugu wanaagsan oo aan arin kasta. Arrinta ugu badan ee la xiriirta arrinta waa in user ayaa helay fur-tago in ay yihiin lagama maarmaan si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo tayada iyo fasalka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay nidaamka iyo nidaamyada oo dhan sida in ay yihiin kuwa ugu fiican rakiban yihiin si ay u sameeyaan shaqo qaabka.
Qaab MOV waa mid aad caadi ah oo sidaas daraaddeed aqlabiyad badan oo ka mid ah shirkadaha soo saarka CD hubiyo in faylasha gundhig gudahood waa in qaab .mov sameeyo sidaas darteed waxaa muhiim ah in la ogaado in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee adeegyada farshaxanka waxaa loo riyaaqay by reading this tutorial buuxda sida ay hubiso in user helo ma aha oo kaliya ka mid ah arrinta laakiin fur-in loo baahan yahay marna loo baahan yahay in lagu xiro sida barnaamijka in la soo sheegnay doonaa in qaybta xigta ka dhigi doonaa waa wax ay doonayeen hubiyo in user helo natiijada ugu fiican ee la xiriirta xallinta arrinta oo waxaa la sameeyaa sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in talaabooyinka iyo terminologies in ay tahay in la raaco waa kuwa in ay yihiin in lagu dabaqo hoos khabiir ama haddii kale user hubaal heli doonaa qasan arrintan la xiriira oo heli doona shaqada sameeyo hab qaldan.
Qeybta 3: Sida loo ciyaaro MOV la Windows Media Player?
QuickTime waa la dhisay-in ciyaaryahan warbaahinta u Mac kaas oo qaar badan oo ka caan ah oo u noqday. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaad ka heli kartaa niyad marka aadan in la furo aad file MOV QuickTime ee Windows Media maamuli kartaa Player ama iyaga la saaxiibo kale oo ay ku nidaamka Windows ka hawlgala wadaagaan. Si aad u ogaado sababta iyo sida aad u xallin karo dhibaatadan, aynu isla eegno ah qaabab file taageeray on Windows Media Player; ASF, .avi, .dvr-Ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpg, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm iyo .wmv laakiin kuma jiraan faylka MOV QuickTime. Si habsami leh keeno files QuickTime MOV galay Windows Media Player (Windows 10 ka mid ah), oo aad have'll si loogu badalo faylasha QuickTime MOV in Windows Media Player qaab saaxiibtinimo ee ugu horeysay.
Si loo badalo aad MOV QuickTime in Windows Media Player si fudud oo dhaqso qaab ay taageerayaan, waxaa la gaaray waqtigii aad isku dayaan in ay ka soo xirfad weli si sahlan loo isticmaalo Video Converter Ultimate . Waxaa qoreysa ah interface weli quruxsan fudud iyo in 3x u qabata files ilaa diinta dhakhso aad u saamaxaaya in ay hawsha ay u dhammaystiraan ku qasabno yar ee farahaaga. Halkan waxaan ku bilaabaan.
Talaabada 1: shuban aad files QuickTime MOV
Ku rakib oo ay maamulaan this Video Converter, jiididda-iyo-hoos u dhac file MOV QuickTime in ay suuqa kala barnaamijka, ama u tag bar menu iyo dooran Beddelaan> dar Faylal ay Faylal ay u helaan file MOV aad. Fiiro gaar ah: tani smart Converter u ogolaanaya diinta Dufcaddii si loo badbaadiyo waqtiga aad, waxaad ku dari kartaa sida badan files MOV sida aad rabto in aad u gal.
Talaabada 2: Dooro wmv sida qaab wax soo saarka iyo folder
Riix Output qaab Qaabka image in la furo liiska hoos-hoos u dooro wmv (warbaahinta ciyaaryahan daaqadaha ayaa ah qaab saaxiibtinimo) ka Qaabka> Video. Goob default weyn ka shaqeeya. Haddii aad rabto in aad sheeg folder wax soo saarka, kaliya riix saddex dhibcood Open Folder ag si ay u doortaan folder aad u jeclaystay.
Waxaad riix kartaa ku Settings badhanka si ay u dejiyaan koobin dheeraad ah labadaba audio iyo video; oo ay ku jiraan xallinta, heerka jir, encoder, bitrates iyo iwm
Ka hor inta diinta, waxaad ku eegaan karo videos-waqtiga dhabta ah ee ay leeg- eegis iyo sidoo kale shakhsiyeeyo aad video by falinjeeerka, lana siii, watermarking oo ku daray qaar ka mid ah saamaynta kale.
Tallaabo 3: Ku bilow QuickTime in Windows Media Player diinta
Hit badalo Oo tanuna ha QuickTime smart in Windows Media Video Converter samayn inteeda kale aad u!
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad loogu badalo kartaa file MOV QuickTime in an MP4, F4V ama iwm oo iyaga ku raaxaysan kala duwan ee qalabka. Waxa kale oo aad iyaga ka arki kartaa in labada 3D ama qaab HD u madadaalada dheeraad ah.
10 fur-tago for windows media player aad u leeyihiin in ay ogaadaan
2 siyaabaha aad ku ciyaari DVD la Windows Media Player
2015 Solvedwindows ciyaaryahan warbaahinta codka lahayn
3 siyaabood oo aad ku ciyaari MKV daaqadaha media player
3 talooyin taageerayaasha radio in isticmaalka daaqadaha media player
Xalin-Aayad files play 3GP in Windows Media Player 12/11 / 10etc
3 talooyin ku saabsan daaqadaha media player codec
3 Solutions in Windows Media Player kala kulantay dhibaato halka ciyaaro faylka
2 siyaabaha aad ku ciyaari FLAC la Windows Media Player
> Resource > WMP > xalin-Aayad files .mov play in Windows Media Player 12/11 / 10etc